Abakhiqizi benyama i-Eskort banxusa abantu ukuba behlise amaphaphu | News24
Abakhiqizi benyama i-Eskort banxusa abantu ukuba behlise amaphaphu
Cape Town - Abakhiqizi benyama abazinze KwaZulu-Natal, i-Eksort, sebenxuse abantu ukuba behlise amaphaphu kulandela isimemezelo sikaNgqongqoshe wezeMpilo uDkt Aaron Motsoaledi sokuthi inyama esilungele ukudliwa yiyo umsuka wokubheduka kwe-listeriosis.
I-listeriosis isidlule nemiphefumulo yabantu abangu-180 kwathi ababalelwa enkulungwaneni bangeniswa ezibhedlela.
UMotsoaledi uthe umsuka walesi sifo ukhonjwa efemini esePolokwane ekhiqiza imikhiqizo yakwaTiger Brands, i-Enterprise Foods.
Lezi zindaba zakamuva sezidale ukwesaba kubathengi, kwaholela ekutheni balahle yonke into eyinyama esilungele ukudliwa abese beyithengile okubalwa u-polony, ama-vienna ne-cold meat.
Le nkampani ekhiqiza inyama, esisebenze eNingizimu Afrika iminyaka engu-101, ithe imikhiqizo yayo ayiqhamuki ePolokwane lapho uMotsoaledi ethe lo bhedukane usuke khona.
OLUNYE UDABA: BUKA: Usutholakele umsuka we-Listeriosis – kusho uMnyango wezeMpilo
“I-Eskort inamafemu e-Estcourt (KwaZulu-Natal) naseHeidelberg (Gauteng) kuphela, nokuyilapho yonke imikhiqizo yakwa-Eskort ekhiqizwa khona ngokukhethekile.
"I-Eskort iyaqhubeka nokusebenzisana noMnyango wezeMpilo nowezoLimo kanti konke ukuhlolwa kwemikhiqizo yakwa-Eksort kutshengisa ukuthi ayinaso lesi sifo. Kule mikhiqizo ehloliwe kubalwa amaRussian, u-polony, ubhekeni nama-vienna," kusho le nkampani.
Le nkampani ithi amafemu ayo alandela imigomo enqala uma eqhuba umsebenzi.
I-listeriosis ikhula ezindaweni ezahlukene okubalwa ekudleni nasemhlabathini.
INational Institute for Communicable Diseases ixwayise ngokuthi izingane ezencane, abantu abadala, abesifazane abakhulelwe kanye nabantu abane-HIV yibo abasengcupheni yokuthola lesi sifo.